Iningi kaMasipala kwakamuva ku Russian Federation, kanye emfushane (asebenzayo okwamanje) emhlabeni itholakala e Kazan. Isiteshi sesitimela (Kazan) ahlotshiswe izitayela ezahlukene, ngamunye yakhelwe ngamunye.
Kuvulwa ongaphansi komhlaba
Kazan kaMasipala wavula wamashumi amabini anesixhenxe ka-August 2005 lesi sehlakalo siyigubhe weminyaka engu Kweminyaka edolobheni. Futhi kwaba uhlobo isipho abantu bakuleli dolobha. Ekuqaleni eziteshini kwadingeka amahlanu kuphela, kodwa ngonyaka we-2013 umugqa wakhe lebhokisi esifundeni esisenyakatho Kazan - Aircraft - ne eningizimu - the iVolga.
Bangaki eziteshini e Kazan namuhla? Ubani eziteshini eziyishumi. Metro (Kazan) ohlanganisa eningizimu yedolobha (wesifunda Azino) nge izindawo zezimboni. Izitimela qalisa esiqalisweni ngomzuzu emihlanu. Sam komhlaba usebenza kusukela ngehora lesithupha ekuseni kuze kube nanye ebusuku. Ngokwezibalo, athwala kuze kufinyelele 120 ayizinkulungwane Kazan nsuku zonke.
Izakhamuzi zemizi Russian ngezinye izikhathi ukuhleka uma they thola cishile ukuthi inhlokodolobha Tatarstan, Metro has iziteshi eziyishumi kuphela. I izivakashi evakashele edolobheni, abahamba amazwe bayajabula ne siqala uhambo olufushane kodwa ezithakazelisayo.
Eminyakeni engaba ngu-nanhlanu edlule, izakhamuzi Kazan ngokwakho hleka umbono lemeya ukwakha ongaphansi komhlaba. Kodwa uma phezu komzila komhlaba got isitimela sokuqala esasitholakala ngagoduka, izakhamuzi bakwazi izinzuzo lolu hlobo ezokuthutha. Leli igatsha lokuqala exhunywe engxenyeni ekude ye maphakathi Kazan, kanye nazo zonke iziteshi ezinhlanu zingase zidlulisele imizuzu nanye nje.
Ngemva kwesikhathi esithile, kwanezela amatalenta ayisihlanu, ukuxhuma emaphethelweni ezimbili eziqhelelene we dolobha Tatarstan. Namuhla uhambo ukusuka komunye umkhawulo kuya komunye kuba imizuzu amabili kuphela. Uma uya ngebhasi, umgwaqo kuzothatha isikhathi esiyihora nengxenye.
Yini izivakashi? Umklamo eziyingqayizivele esiteshini ngasinye. Ngenhla ke zakhipha wasebenza njengoba abaklami mlando. Sasifuye ton of zomlando enothuli, ukuze uqambe isiteshi nge incazelo.
Ngokwesibonelo, esiteshini "ngefilakisi Sloboda" egcinwe endaweni lapho ngaphambili isethwe esikhiqiza sewebhu. A "Imbuzi Sloboda" sizodingida imibuzo futhi amahlaya igama lakhe, etholakala endaweni lapho eminyakeni eyikhulu edlule ngesikhathi ukwaluka imfuyo. Kubandakanya izimbuzi. Thina manje bazichanza ongaphansi komhlaba esiteshini. Kazan bangaziqhayisa komhlaba yayo.
"Ukunqoba Avenue" esiteshini
Lapha, igama liyazikhulumela. Ngo wezangaphakathi, kusetshenziswa isihloko uzowanqoba amaNazi. Izindonga namakholomu kuthiwa uphahlwe ngemabula. Phezu kodonga imakwe kuso amagama emizi-Amaqhawe ezweni lethu, futhi izibani ezilengayo zifanekisela iziqhumane, May 9, 1945.
Eduze kulesi siteshi liyisikhungo "Avenue", ukuyothenga lapho izivakashi uzothola yokudlela ethokomele cuisine kazwelonke, emakethe, futhi "McDonald". inombolo yethilamu 5, kungenzeka i-drive imizuzu eyishumi ohlelweni lwe kusukela shopping centre ngobukhulu Kazan ( "MEGA" futhi "South").
Okubizwa ngokuthi "cosmic" Kazan ongaphansi komhlaba esiteshini. Kuwufanele uthole esitimeleni futhi ujabulele imibono ezizungezile, ngoba phansi esiteshini kuphela edolobheni.
"Indwangu Sloboda" (Kazan city centre)
Metro station, etholakala maphakathi nedolobha. Design Its uyabulawa e ikhofi kanye ukhilimu imibala, indlela 18-19 eminyaka. "Ekiyat" eduze esiteshini kuyinto yaseshashalazini unodoli. Eduze - Ukuhamba Street Petersburg. Kushalazela ngomgwaqo omkhulu Kazan - Bauman.
Kusukela kulesi siteshi waqala ukwakhiwa ongaphansi komhlaba. Design Its onesizotha kakhulu, kodwa yayakhiwe kwirekhodi isikhathi - iminyaka nesigamu. Inombolo yabasebenzi iqhaza kule nqubo, ifinyelele kubantu 800.
Njalo isentimitha kwezindonga esiteshini embozwe yamatshe efanekisa zamaTatar kazwelonke tale. Lapha kukhona portrait imbongi G. Tukai. Lapha uqala maphakathi Bauman emgwaqweni lapho izivakashi uzothola amathilomu eziningi ethokomele, amahhotela, izitolo abathengisa izinto eziyizikhumbuzo shopping centre "Ring."
Etholakala eduze Kazan Kremlin. Ukwakha ezifanele: KaMose elinezinhlamvu wasenganekwaneni, umbhoshongo omncane nge ekhanyayo. Ngesikhathi ophumayo esiteshini kukhona tour opharetha ezincane. Okulandelayo - Central uMnyango Isitolo, eNational Museum, i eziyinkimbinkimbi bezijabulisa "Pyramid".
Igama esiteshini livela esitolo Soviet, okuyinto yayidumile edolobheni phakathi nenkathi yamaSoviet. Lalibizwa ngokuthi "Youth". Ukwenza umbala esiteshini kazwelonke okuthiwa ngolimi lwesiTatar. Kukhona emakethe besifunda eMoscow. Eduze elisanda elilungisiwe Ipaki lamasiko ukuzilibazisa maphakathi Bemithi.
esiteshini Simple futhi yesimanje kungekho frills. Eduze ophumayo kukhona yezitolo "Tandem" Kazan umbhalisi, ipaki "Kyrlay" kanye ukuvakasha. Olunye lwezinhlelo zethu ezinkulu amanzi amapaki Russia - "Riviera" (Kazan Metro "Imbuzi Sloboda" isitshalo) itholakala imizuzu emihlanu nje kuphela kusukela ozophuma kuya edolobheni.
Lapha-ke ingenye zezitimela komuzi. Kuyinto zanamuhla futhi emuhle. Zokusebenzela e Kazan ezimbalwa, ngakho kufanele ucacise lapho ufuna ukuqeqesha noma ukukhonza iza. Izivakashi ngokuvamile ukudida iphuzu Ukuhamba.
Lona Kazan ongaphansi komhlaba esiteshini. igama Its livela amabhizinisi eliseduze. Lokhu Aircraft College, inombolo isitshalo 22. Kukhona isitshalo motostroitelny Gorbunov kanye nokungcebeleka epaki enkulu, lapho kukhona isithombe Lenin.
Ngingayithola kanjani ekungeneni esitimeleni
Metro (Kazan), kanye nakwamanye amadolobha, abaqokelwe lokho yisiKhulu incwadi "M". Kodwa wendawo "Emka" zaveza oluhlaza futhi "whorl" nokuphathelene ngesimo a Tulip. Ukubona incwadi phambi kwakhe, akukho kungabaza ukuthi lokhu emnyango esitimeleni.
The izinto eziyinhloko Petersburg: ukubuyekeza yomlando futhi ezithakazelisayo amaqiniso
"Credit Professional": Izibuyekezo Inkampani
Indlela ukubhaka namabhanisi e Sims FreePlay?
Libhokisi ngezandla zakhe: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Biography futhi ukuphila siqu umlingisi Igor Filippov
Ilayisi Powder: incazelo kanye nokubuyekeza